Izvo zvakanakira emu mafuta pane vhudzi uye ganda - AFRIKHEPRI
Zvakanakira emu emu mafuta nevhudzi uye ganda
Lemu weAustralia (Dromaius novaehollandiae) ndeyokurairwa naStruthioniformes uye kumhuri yaDromaiidae, rudzi bedzi rwemhuri iyi kunze kwekuti vachiri vapenyu nhasi. Kufanana neese ma ratites (kunze kwe kiwis), iyo emu ine inorema uye yakaoma muviri, makumbo akasimba akakodzera kumhanya uye akaomeswa mapapiro. Shiri yacho inogona kuvhara madaro makuru, pakumhanya kazhinji kwe7 km / h. Iyo inokwanisa kusvika zvekumhanya zve 48 km / h, ine mitsetse inenge yakapetwa 2,70 m.
Nhoroondo yemafuta emuu
Kwemakore anopfuura chiuru, maAustralia maorigine vakawana mafuta emu uye vaishandisa kurapa maronda, kudzoreredza kurwadziwa nekuzvidzivirira kubva kuzuva rinopisa. Ongororo dzinoverengeka dzesainzi dzinoratidza nhasi kuti emu oiri ine zvayakanakira kurapa zvinhu.
Emu mafuta mafuta ekutanga.
Emu mafuta hachisi chinhu mafuta asi mumwe dzinongoitika Synergies kupfuura simba uye kunzwisisa mavhitamini, zvicherwa, zvinokosha mafuta acids, naOmega 3, 6 naOmega naOmega 9. Iine transdermal, therapeutic uye nutritional properties. Inoshandiswa sekuwedzera kwezvokudya mumamashini e capsules kana kushandiswa kune ganda, rakachena kana rakavhenganiswa.
Dry kana kuti ganda rakakura
Emu mafuta ane masikirwo e-antioxidants anononoka pasi zvinokonzerwa nokukwegura. Pedyo nevanhu sebum, iyo ndeimwe yemafuta anoshanda zvikuru ekunyorova ganda. Inokurudzirwa kune vanhu vane ganda rakaoma kana rakaoma kwazvo kana vanoda kudzivirira ganda ravo kubva mumamiriro ekunze.
Zvimwe zvezvinhu zvinokosha zvakasikwa zvinowanika emu emu mafuta zvinongolinic acid uye oleic acid. Kubatanidzwa kwezvipo izvi kuporesa kunopa zororo kumusasa aches uye maronda ekubatana. Mhedzisiro ndeyekusingaperi-kupesana nekuvhiringidza. Iyo inoshandiswa kunyanya kumitambo yekushambadzira.
Iyo emu emu mafuta inokurumidza kugunzwa neganda is hypoallergenic uye inoderedza vanhu vanotambura ne psoriasis uye eczema. Iyo inewo chaiyo kuporesa zvinhu zvinogona kuderedza kuonekwa kwezvipembenene zvakadai sekucheka kana kupisa. Emu mafuta yava chinhu chinokosha mune dzimwe nzira dzokurapa kwekuchengetwa kweganda.
Chigadzirwa chechisikigo uye chisingafadzi
Mushure mekushandiswa paganda, chigadzirwa ichi chisina kunaka, chisiri chinopisa chinoderedza uye chinoenderana nekugadzirwa kweganda, kuchiisiya ichikasika uye isina girasi. Zvakanakira emu emu mafuta ndezvenguva refu, kunyange mushure mekucheneswa patsva kweganda.
A supplement supplement inowanikwa muOmega 3 uye Omega 6
Emu mafuta inoshandiswawo sezvokudya zvinowedzera. Utano hwehutano hwahwo hwakawanda mupfungwa yokuti kudya kwakanaka uye kudya kunovaka muviri kunosimbisa maitiro ezvirwere zvemuviri uye kuchengetedza muviri woutano, kusanganisira ganda.
Kurapa kunonakidza kumwe kurapa.
Nhamba yakawanda yeongororo yakaitwa pa emu emu uye kushandiswa kwesayenzi kuri kuitwa zuva nezuva. Makunivhesiti mazhinji uye masangano anobatanidzwa mukutsvaga emu emu zvinogona kuwanikwa muUnited States.
Zvose zvinobatsira uye zvinobatsira:
Inobatsira kubvisa zvinetso zveganda: psoriasis, eczema, ganda rakaoma, blues, mukaka wemucheche wevana ...
Iine mavitamini A uye E
Iine mafuta anokosha anokosha, Omega 3 uye 6
Iine Omega 9
Kuporesa uye kugadzirwa kweganda
Iine collagen yemasikirwo
Usarega kuisa mafuta
Kupinda kwepamusoro mucheche (kuvapo kwe oleic acids)
Haiti kukonzera clogging yeganda
Australia paraben yemahara emu mafuta Ultra moisturizer (250ml) Yakagadzirwa muAustralia
1 nyowani kubva ku € 9,99
kubvira waMay 25, 2020 5:43
Paraben-isina, isina-girazi, yakawedzera-hydrating kirimu yakakwenenzverwa neyemnyama emu mafuta uye vhitamini E - isina kunhuhwirira nehunhu hwakaomeswa, nyoro nyoro uye inonhuhwirira
Inopa kuzorora kwemaawa makumi maviri nemaviri kubva, rakapwanyika, rakaoma, rakashata ganda
Kurumidza kupinda mukati meganda, uchiisiya ichinzwa nyowani, inowedzera uye Ultra hydrate zuva rese
Kwete kuyedzwa pamhuka
Yakagadzirwa muSydney, Australia.
Ganda rakasviba: ungawana sei nheyo yakanaka?
Krishnamurti uye dambudziko redzidzo (Audio)